Soo dejisan Spotify 1.1.52.687 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Spotify
Spotify – software ah oo loogu talagalay in la helo oo aan dhagaysano muusigga internetka. Software wuxuu ka kooban yahay qaybo ogolaanaysa in aad ku raadin music by horyaal song, hadalyo, fannaaniin, albums ama Playlists abuuray. Spotify falgala Facebook oo u saamaxaaya in ay u arkaan uruuriyaa muusikada oo saaxiibo, wadaagi karo diiwaannada iyo wadajir saxaa Playlists. Software waxaa ka mid ah maktabadda weyn oo ah, radio, talooyinka ku salaysan dhegaysi ah diiwaanka, waxqabadka caan ah iyo qaar badan oo kale. Spotify leedahay interface ah dareen leh oo u fududahay in la isticmaalo.
Search iyo dhegeysato muusikada online
Horyaalka heerka ku haboon ee kuwan raadkaygay
Library A badan oo heeso
Opportunity si wadajir saxaa Playlists
Soo dejisan Spotify
Faallo ku saabsan Spotify
Spotify Xirfadaha la xiriira
Koodhadhka ’StANDARD Codecs’ ee Windows – oo ah nooc ka kooban kumbuyuutarro iyo deodeyaal si ay dib ugula ciyaaraan inta badan qaabab maqal iyo muuqaal ah ee ciyaar media ah.
Foobar2000 – waa fududahay in la isticmaalo qalabka dhawaaqa. Software-ka wuxuu taageeraa qaabab badan oo maqal ah wuxuuna awood u siinayaa inuu rakibo qaybaha dheeriga ah si loogula shaqeeyo feylasha maqalka ah.
MP4 Player – player media ah oo taageera qaababka kala duwan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abaabusho maktabada muusikada oo aad aragtid cinwaanada hoosta.
GIMP – waa aalad awood leh oo lagu shaqeyo sawirada. Softiweerku wuxuu leeyahay qalab badan oo lagu abuuro, lagu duubo oo lagu duubo sawirrada.